AirPods Archives | Pyae Heinn Kyaw's Blog
AirPods ထိပ်က Silicon Tips ပျောက်သွားရင် အလကားပြန်လဲပေးမယ့် Apple ရဲ့ Service (ပုံမှန်ဆိုပိုက်ဆံတောင်းပါတယ်)
AirPods, Apple, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အားလုံးပဲသိပြီးကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ .. AirPods Pro တွေမှာ Noise Cancellation ထည့်သွင်းပေးဖို့အတွက် Silicon Tips တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် အဆိုပါ Silicon Tips တွေဟာ Size3မျိုးနဲ့လာတာဖြစ်ပြီး ပျောက်သွားခဲ့ရင် Apple မှာပြန်ဝယ်ရပါတယ် ပြန်ဝယ်ရတဲ့စရီတ်က တစုံကို $4 ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ် .. AirPods Pro ရဲ့ Silicon tips ပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုပြန်ဝယ်ရမလဲ? – https://www.pyaeheinnkyaw.tech/how-to-buy-airpods-pro-eartips/ ဒါပေမယ့် Silicon Tips တွေကို Free ရမယ့်နည်းလမ်းတခုရှိပါတယ် .. အဲ့တာကတော့ AppleCare+ Protection ဝယ်ထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ် .. AirPods Pro အတွက် AppleCare+ ဝယ်မယ်ဆိုရင် $29 ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ် AppleCare+ …
AirPods ထိပ်က Silicon Tips ပျောက်သွားရင် အလကားပြန်လဲပေးမယ့် Apple ရဲ့ Service (ပုံမှန်ဆိုပိုက်ဆံတောင်းပါတယ်) Read More »
ပျောက်သွားတဲ့ AirPods တွေကိုဘယ်လိုပြန်ရှာကြမလဲ?
UNICODE ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ ပျောက်သွားတဲ့ AirPods တွေကိုဘယ်လိုပြန်ရှာကြမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် အရင်ဆုံး ပြန်ရှာလို့ရအောင်ဘယ်လို Settings ချထားဖို့လိုပါတယ် .. သင့် iPhone မှာ Find My iPhone ဖွင့်ထားရင် ပျောက်သွားတဲ့ AirPods ကိုပြန်ရှာလို့ရပါပြီ တကယ်လို့ မဖွင့်ရသေးရင် iPhone က Settings > iCloud > Find My ထဲက Find My iPhone ကိုဖွင့်ပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ Find My သုံးပြီး AirPods ကိုပြန်ရှာလို့ရသလဲ? သင့် AirPods က Case ထဲမှာမရှိတဲ့အချိန်နဲ့ iPhone နဲ့ Connected ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပြန်ရှာလို့ရပါမယ် ဆိုလိုတာက သင့် AirPods တွေက Case …
ပျောက်သွားတဲ့ AirPods တွေကိုဘယ်လိုပြန်ရှာကြမလဲ? Read More »
Apple ကနေအလကားပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Repair Program တွေအကြောင်း
AirPods, Apple, iPad, iPhone, Knowledge, MacBook, News / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE လက်ရှိ Apple ကနေ အလကားပြုပြင်ပေး ဒါမှဟုတ် အသစ်လဲပေးနေတဲ့ Repair program 12 ခုရှိပါတယ် .. Apple Repair Program ဆိုတာကဒီလိုပါ .. ရောင်းချလိုက်တဲ့ Products တွေမှာ Factory fault ကြောင့် error တက်နေတဲ့ products တွေကို အခမဲ့ပြုပြင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် အဆိုပါ Apple repair programs တွေကို Apple Authorised Service Providers ဖြစ်တဲ့ mCare Apple Authorised Service Provider (https://www.facebook.com/mCareasp/) တွေမှာ လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ် .. iPro ကတော့ Mac သီးသန့် service လုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီး …
Apple ကနေအလကားပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Repair Program တွေအကြောင်း Read More »
အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ AppleCare plan များ
AirPods, Apple, Apple Watch, iPad, iPhone, MacBook, News / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE AppleCare ဆိုတာ Apple Official Warranty ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ .. ပုံမှန်အားဖြင့် Apple Official Warranty တွေဟာ Service လုပ်ဖို့ တစ်နှစ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Telephone Technical Support ကိုတော့ ရက် 90 ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ MacBook တွေအတွက် AppleCare plan ဝယ်လို့ရနေပြီဖြစ်ပေမယ့် iPhone တွေအတွက်ကတော့ ဝယ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး Apple Warranty – https://www.pyaeheinnkyaw.tech/apple_warranty/ AppleCare ဝယ်လိုက် Warranty ဟာနောက်2နှစ်ကိုထပ်တိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ..2နှစ်ပြည့်သွားရင်တော့ Warranty ကုန်ပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရပါပြီ အဲ့တော့2နှစ်စာတခါတည်းပိုက်ဆံပေးဝယ်ရသလိုဖြစ်နေတာပါ .. ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ AppleCare …
အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ AppleCare plan များ Read More »
Apple Product ကိုင်သူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ Apple Warranty အကြောင်း
AirPods, Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Knowledge, MacBook / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ကဲ အားလုံးပဲ iPhone အသစ်တွေလဲကြေငြာသွားပြီဆိုတော့ Apple fan တွေအနေနဲ့ဝယ်ဖို့စိုင်းပြင်နေကြပြီထင်ပါတယ် .. မိမိတို့ရဲ့ iPhone ကို Warranty အပြည့်အဝလိုချင်ရင် ဆိုင်ရွေးမမှားမိအောင် ဒီ Post လေးကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖတ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်က end-user တွေဖက်က ရပ်တည်ပြီးရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော့် post ဟာ ဘယ်ဖုန်းဆိုင်ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုခြင်းမရှိသလို promote လုပ်ပေးခြင်းလဲမရှိပါဘူးဆိုတာနားလည်စေချင်ပါတယ် .. အဆင်ပြေရင် share ပေးသွားကြဖို့လဲ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Apple Warranty အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် .. Apple အနေနဲ့ သူ့ product ဝယ်ယူသူတိုင်းကို 1 Year Official Warranty ပေးပါတယ် .. Refurbished လို product …
Apple Product ကိုင်သူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ Apple Warranty အကြောင်း Read More »